Haddii si Joogto ah Habeenkii Hurdo La’aan kusoo Wajahdo Khatar Baad ugu Jirta Faalig | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Haddii si Joogto ah Habeenkii Hurdo La’aan kusoo Wajahdo Khatar Baad ugu Jirta Faalig
Dadka waayeelka ah ee hurdo la’aantu hayso waxa adkaada dhuumaha dhiigga qaada (arteries), taasoo ku keenta in ay si fudud ku qadaan xannuunka faaliga sida ay iftiimisay daraasad cusub.
Cilmi-badhayaal baadhitaan ku sameeyey muddo dheer hurdada dadka waaweyn, gaar ahaan waxyaabaha ay hurdo la’aantu ku keeno ayaa ogaaday in ay dadka habeenkii hurdadu ka yaraato ay khatar ugu jiraan waax qalalka (faaliga).
Daraasadan oo badhitaan lagu sameeyey maskaxda mayti waayeelka ah, kuwaasoo kormeer lagu lagu sameeyey hurdadooda, taasoo maskaxdooda lagu eegay weynayso (Microscope), waxa la ogaaday in dadka hurdada ka toos toosa amma ay ka dhammaato habeenkii ay ugu wacan tahay dhaawac soo gaadha dhuumaha dhiiga iyo nudo (tissue) maskaxda ku yaala.
Dhuumaha dhiigga qaada oo adkaada waxa sababa caabuq amma haddii dux amma baruur isku dahaadho daloolada amma dhuumaha dhiig mareenka.
Sidoo kale, cilmi-baadhistu waxa ay tilmaantay in dadka hurdado ka yar tahay, sigaarka caba, macaanku hayo amma kuwa dhiig karku ku dhaco ay khatar badan ugu jiraan faaliga, asaaasaqa amma wadno xannuunka.
“Nooc ka mid ah dhaawac maskaxda ah oo aanu baadhitaan ku samaynay ayaa muhiim noqday, inkastoo aanay sababin faaliga, balse waxa ay keenta xannuuno halis ah. sidaa darteed waxa jira habab kale oo maxsuulkan sheegay in hurdo la’aanta ay keenaan, tusaael ahaan qofka oo dhuumaha dhiiggu ay gaadhsiin wayaan dhiiga maskaxda, wareega dhiigga oo maskaxda ku yaraada, labada oo isu tagaana waxa ay keenaan arrimo badan oo halis ah,” ayuu yidh Dr. Andrew Lim oo baadhitaankan hoggaaminaayey, kana tirsan Jaamacada Toronto.
Cilmi-badhayaasha oo baadhitaan ku sameeyey 315 maskaxood oo celcelis ahaan da’doodu tahay 90 sanno, oo guud ahaan 70% dumar ahaayeen, ayaa midkiiba hal toddobaad la baadhaayey, lana eegaayey inta ay seexatay, gaar ahaan waqtigii ay noolayd amma qofka ay ku jirtay noolaa.
Waxa la ogaaday in 29% ka mid ah ay qabeen xannuunka falaiga, halka 61% kalena ay ka soo muuqatay calaamado tilmaamaya in dhuumaha dhiigga maskaxda geeya dhaawac soo gaadhay, taasna ay hurdo la’aantu keentay.
Xogta ka soo baxday daraasadan waxa ay muujisay in 50% haweenku ay xilli hore hurdada ka kacaan amma ay hurdadu ku yar tahay marka la barbardhigo 41% ragga ah oo hurdadu ku yar tahay.
Bilyaneerada ugu Da’da Yar Tujaarta Adduunka iyo Hantidooda Halkay ka Heleen